Sidee loo kaydiyaa goobaha desktop desktop? | Laga soo bilaabo Linux
Sidee loo kaydiyaa goobaha desktop desktop?
Waxaan sii wadaynaa taxanahan yar ee casharrada ah sida loo kaydiyaa qaabeynta qaabkeena bay'ada desktop, maqaaladi hore waxaad kaheli kartaa habab aad ku taageerto XFCE y LXDE
Hadda waa marki loogu talagalay deegaanka desktop desktop in sidaad ku ogtahay fargeeto Gnome 2 iyo sameynta keydka Mate waa inaan sameynaa waxyaabaha soo socda.
1 Rakibaadda Dfcon
2 Sameynta bakcup-ka Mate
3 Soo celinta keydka
Si loo xakameeyo qaabeynta Mate waxaan ku sameyn karnaa iyadoo la kaashanayo Dconf. Waa nidaam xog ururin oo deegaanno badan oo desktop-ka u eg oo Gnome u eg ay ku tiirsan yihiin in loo qeexo waxyaabaha ka jira jawiga desktop-ka isticmaaleha.
Qalabkan waxaa badanaa lagu daraa inta badan qaybinta Linux la shaqeeya Gnome ama codsiyada tan.
Haddii aanad haysan, waxaad ku rakibi kartaa habka soo socda iyadoo kuxiran nidaamka ay adeegsanayaan.
Hadday yihiin adeegsadayaasha Debian, Ubuntu, Linux Mint, Elementary OS ama nidaam kasta oo laga soo dheegtay kuwan, waxay ku rakibi karaan qalabkan amarka soo socda:
Arinta ah kuwa isticmaala Arch Linux, Manjaro, Antergos ama nidaam kasta oo laga soo qaatay laga bilaabo Arch Linux, si fudud u socod amarka soo socda:
Halka loogu talagalay kuwa isticmaala CentOS, RHEL, Fedora iyo nidaamyada laga soosaaray kuwan waxay ku rakibi karaan arjiga amarka soo socda:
Haddii aad tahay isticmaale nooc kasta oo OpenSUSE ah, waxaad si fudud ugu rakibtaa amarka soo socda:
Sameynta bakcup-ka Mate
Maaddaama jawiga desktop desktop uu leeyahay dhammaan xogtaada Dconf, waxaad u baahan doontaa inaad ka dhoofiso macluumaadka kaydinta xogta si aad u taageerto qaabeyntaada.
Habka ugu fudud ee gurmad lagu sameeyo Mid ka mid ah goobaha desktop desktop ayaa iloobaya in la ogaado aagga Dconf ee aad u baahan tahay inaad si gaar ah u kaydiso oo taa badalkeeda aad ka samayso nuqul guud.
Tani waa waqti aad u badan, maadaama hawsha qashin-tuurku u taagan tahay dhammaan wixii Dconf ay ahayd inuu bixiyo, laakiin faa'iidada ayaa ah in wax kasta oo ku dhex kaydsan dib loo kaydin doono
Si loo bilaabo hawsha soo saarista Dconf Waa inay furaan terminal oo ay fuliyaan amarka soo socda:
Waa inay ogaadaan inaysan isticmaalin sudo ama su amar.
Deegaanada Desktop-ku ma isticmaalaan isticmaalaha xididka ama nidaamka faylka si ay u qaabeeyaan shaashadda shaqada, markaa isku dayga tani waxba kaama taraynayso.
Hubi in keydinta Dconf ay shaqeyso adoo fiirinaya waxyaabaha ku jira feylka, adoo adeegsanaya amarka bisadda.
Marka dib loo eego way keydin karaan, wadaagi karaan ama waxkasta oo ay niyada ku hayaan inay ku sameeyaan keydkan.
Beddelka in wax walba la kaydiyo ayaa ah in loo sheego Dconf inay dhoofiso oo keliya waxyaabaha ku jira / org / mate, halkii ay ka ahaan lahayd wax walba.
Sidan oo kale waxay si gaar ah diirada u saari doontaa dejinta Deegaanka, iyada oo laga tagayo goobaha isticmaalaha.
Arrintan awgeed waxaan si fudud u fulinaynaa amarka soo socda:
dconf dump / org / mate> ~ / Desktop / dconf-mate-backup
Si la mid ah waxaan ku hubin karnaa in bakcup si sax ah loo abuuray:
Soo celinta keydka
Si loo soo celiyo keydka jawiga desktop desktop Si fudud waa inay fuliyaan amarradan soo socda, waxaa muhiim ah in la xoojiyo in ay tahay in lagu rakibo Dconf:
Dib u soo celinta kaydinta desktop-kaliya ayaa u shaqeeya si la mid ah sida keydka buuxa.
Iyadoo Marka laga hadlayo kuwa kaliya taageeray deegaanka, waa inay qoraan:
Hadda waa inaad dib u bilowdaa fadhigaaga isticmaale si markaa isbeddelada aad soo celisay ay ula wareegaan rakibidda cusub.
In kasta oo lagugula talinayo in aad sameysid reboot nidaam si isbedelada si sax ah loogu rakibo bilowga nidaamka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sidee loo kaydiyaa goobaha desktop desktop?
Waxay noqon laheyd mid xiiso leh in la awoodo in la keydiyo qaabeynta desktop-ka oo loo adeegsado tusaale ahaan dhammaan isticmaaleyaasha cusub ee mar dambe la sameeyo.
Qalab aad u fiican oo keyd ah oo leh taageero loogu talagalay dib-u-celin badan sida B2, S3, REST, sftp, rclone iyo kuwa kale. https://restic.net
Ku jawaab sulfuror
Aad u fiican. Mahadsanid.
OS aan dhammaad lahayn: waa disto waa inaad ogaataa
Sidee loo sameeyaa kaydinta gacanta ee XFCE ee Linux?